TimescaleDB 2.0 inouya nerutsigiro rwevashandisi-vanotsanangurwa zviito, shanduko kune TSL rezinesi uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
TimescaleDB 2.0 inouya nerutsigiro rwevashandisi-vanotsanangurwa zviito, shanduko kune TSL rezinesi uye nezvimwe
Iyo DBMS TimescaleDB 2.0 kuburitswa kwakaburitswa, shanduro mairi shanduko dzakawedzerwa kune rezinesi reTSL kupa vashandisi kodzero zhinji uye tendera kushandiswa kwemahara kweese maficha eiyo bhizinesi vhezheni, kusanganisira kumanikidza, kuchengetedza kugovera pamatanho mazhinji uye kuenderera kuunganidzwa. Rezinesi rakabvisa zvirambidzo pachiyero chegungano renharaunda, rakapihwa mvumo yekugadzirisa nekuchinja, kubvisa mabhanhire akabhadharwa (maficha ese akambopihwa muTimescaleDB Enterprise akaendeswa kuCommunity edition).
Kune avo vasingazive nezve TimescaleDB, iwe unofanirwa kuziva izvo inoitwa seyekuwedzera kwePostgreSQLyakagadzirirwa kuchengetedza nekugadzirisa dhata muchimiro chenguva dzakateedzana (zvikamu zvemiparamende kukosha panguva dzakatarwa, zvinyorwa zvinoumba nguva uye seti yemitengo inoenderana nenguva ino).
Iyi fomu yekuchengetedza yakakwana yezvikumbiro senge masystem ekutarisa, mapuratifomu ekutengesa, masisitimu ekuunganidza metric uye sensor inoti. Nzira dzekubatanidza pamwe neGrafana uye Prometheus chirongwa chinopihwa.
Chinhu chakakosha cheTimescaleDB ndiko kutsigira kwayo otomatiki kupatsanura dhata riya, pamwe nekuyerera kwedata yekuisa inongogoverwa pakati pematafura akapatsanurwa uye kuti zvikamu zvinogadzirwa zvinoenderana nenguva (chikamu chimwe nechimwe chinochengeta dhata kwenguva yakati rebei) kana zvine chekuita nekiyi yekumanikidza.
1 Main makuru maficha muTimescaleDB 2.0
2 Maitiro ekuisa TimescaleDB paLinux?
Main makuru maficha muTimescaleDB 2.0
Mune iyi vhezheni itsva kumisikidzwa kutsva kwekuenderera mberi kuchiitwa mabasa kunoitwa Vanokutendera iwe kuramba uchingowedzera data rinouya munguva chaiyo (ivo vakafanana neakashongedzwa PostgreSQL maonero, asi akasiyana mukuti ivo vanopa otomatiki kuverenga kweye mhinduro yemubvunzo kumashure sezvo data rinosvika kana shanduko).
Kuitwa kutsva inosimbiswa neshanduko muAPI, iyo yava kupatsanura zvakajeka mabasa nemitemo yekubatanidza, ichikubvumidza iwe kuti ushandise maficha senge ekumisikidza nemaoko imwe nhanho mune yakaunganidzwa maonero (semuenzaniso, iwe unogona otomatiki kuverengera data nyowani, asi siya dzekare dhata renhoroondo yekumisikidza manyore). Shanduko idzi dzichaitawo kuti zvikwanise kuitika mune ramangwana kuita rutsigiro rwemabasa akagoverwa kana uchinge uchishanda nemazhinji node.
Imwe shanduko yakakosha ndeye tsigiro yezviitiko zvinotsanangurwa nemushandisi (UDA, Mushandisi Anotsanangurwa Chiito) kuita mashandiro nemaitiro pane chirongwa yakanyorwa nemitauro inopokana. Chinhu chitsva chakakodzera kuita nguva nenguva mabasa asina kufukidzwa neanenge aripo masimba ekubatanidza marongero (stale data kuchenesa, kumanikidza, uye kuenderera kuunganidzwa).
Yakawedzerwa rutsigiro rwekuparadzirwa hypertext, ichibvumira kuchengetedza kuti ipararire munzvimbo dzakawanda ne TimescaleDB. Iyo TimescaleDB-yakavakirwa sango yekugadziriswa inosanganisira imwe yekuwana node uye akawanda ekuchengetedza node. Zvese zvikumbiro kune zvakagoverwa hypertext zvinonongedzwa kune yekuwana node uye zvobva zvagoverwa pakati penhamba dzekuchengetedza.
Tsigiro yemawonero matsva eruzivo yakawedzerwa, ichikubvumidza iwe kuti uwane ruzivo nezve hypertext, masango masumbu, tambo, marongero, uye chirongwa chekutanga basa.
Maitiro ekuisa TimescaleDB paLinux?
Kune avo vanofarira kukwanisa kuisa TimescaleDB pane yako systemIvo vanogona kuzviita nekutevera rairo dzatinogovana pazasi.
Panyaya yeavo vari Vashandisi veUbuntu:
Munyaya ye Debian:
Iye zvino isu tichaenda kunogadzira dhatabhesi ne:
Pano akasiyana masisitimu anogona kuitwa, iyo yaunogona kubvunza Mune inotevera chinongedzo.
Pakupera, ingotangazve sevhisi:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » TimescaleDB 2.0 inouya nerutsigiro rwevashandisi-vanotsanangurwa zviito, shanduko kune TSL rezinesi uye nezvimwe
Kuguma kweFlash. Sara zvakanaka kune tekinoroji yakachinja iyo webhu
Manjaro 21.0 inotangisa yayo yekutanga yekutarisa vhezheni, uye codename yayo ichave Ornara